Puntland oo ka qaybgelaysa barnaamij looga hadlayo doorashada Maraykanka. – Radio Daljir
Luulyo 12, 2016 10:34 g 0
(July 13 2016)-Waaxda arrimaha dibadda dalka Maraykanka ayaa Agaasimaha Guud ee madaxtooyada dawladda Puntland Deeq Saleebaan Yuusuf ku casuntay barnaamij wax lagaga baranayo doorashada dalka maraykanka, kaas oo lasoo marsiiyey safaarada Mareykan ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Barnaamijkaan oo sannadkiiba mar lagu qabto xarunta looga arrimiyo dalka maraykan ee magaalada Washington ayaa wuxuu socon doonaa muddo labo asbuucah, waxaana lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay safaaradda maraykan ee Nairobi in ay ka faa’iidaysan doona 20 qof oo ka kala socda dalalka caalamka.
Deeq Saleebaan Yuusuf agaasimaha guud ee Madaxtooyada dawladda Puntland oo matalaya dawladda Puntland ayaa ah qofka keliya ee ka socda dalka Soomaaliya wuxuuna booqan doonaa shan gobol oo ka tirsan dalkaasi maraykan, waxaana booqasho loo gayn doonaa qaar ka mid ah xarumaha looga taliyo dalka Maraykanka si’ uu wax uga ogaado hannaanka doorashada dalkaasi maraykan ee dhici doonta sannadkaan dhammaadkiisa.
Arrimaha ay wax ka ogaan doonaan kasoo qayb galayaasha barnaamijka lagu magacaabo “Mashruuca Hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiinta Da’da yar” ayaa waxaa ka mid ah doorka ay siyaasadda ku leeyihiin hogaamiyayaasha da’da yar yar iyo xiriirka shacabka iyo dawladda ee ku aaddan doorshada kusoo wajahan dalkaas.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in dhammaan kasoo qayb galayaashu fursad u heli doonaan inay booqashadan waxbadan kasoo faa’iidaysantaan muddada uu socdo barnaamijku.
Barnaamijka Hogaamiyayaasha iyo Siyaasiyiinta Da’da Yar ayaa waxaa la aas-aasay 1940-kii, waxaana ilaa iyo hadda ka qayb galay 50 shiqsi oo ku guulaystay billadda caalamiga ah ee “Nabada” iyo in ka badan 335 hoggaamiye oo Madax kasoo noqday dawladaha Caalamka iyo agaasimayaal madaxtooyo oo ka kala socda dalalka caalamka.